Rose of Sharon: September 2011
ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ထိုမိန်းမရှိသည်… သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိုမိန်းမရှိသည်… ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ထိုမိန်းမရှိနေသည်….
ထိုမိန်းမသည် သူများကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်း၊သူများအိမ်တွင်းရေးကိစ္စနှင့် သူများဘဝနောက်ကြောင်းတွေကို အလွန်သိချင်သူဖြစ်သည်… သူ့ဘဝနောက်ကြောင်းတွေကိုတော့ဖုံးကွယ်ထားသူဖြစ်ပြီး ကောင်းချက်လေးတွေကိုသာရွေးပြီး ထုတ်ဖော်ကြွားဝါတတ်သူဖြစ်သည်… ပွင့်လင်းသည်ဟုခေါင်းစဉ်တတ်ပြီး သူများခံရခက်အောင်ခပ်ကျောကျောစကားတွေပြောတတ်သည် (တကယ်ကပွင့်လင်းခြင်းမဟုတ်၊ဟောင်ဖွာဖွာနိုင်ခြင်းနှင့် စရိုက်ကျခြင်းဖြစ်သည်)
တခြားသူတစ်ယောက်နှင့်ရင်းနှီးနေသူအား သူလည်းထိုသူအကြောင်းသိထားသလိုလိမ်ညာပြီး စကားတွေအစ်အောက်တတ်သည်… ထို့နောက်ထိုတခြားသူတစ်ယောက်နှင့်ရင်းနှီးနေသူအား နင်ကသာခင်နေ ငါကဖြင့်နင့်အကြောင်းတွေ သူအကုန်ပြောသွားလို့သိရတာဆိုပြီး ရန်တိုက်ပေးတတ်သည်…
အခုမှတွေ့သူတစ်ယောက်ကိုလည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ အတင်းမေး စပ်စုပြီး မကျေနပ်သေးလျှင် နီးစပ်ရာတွေဆီက အကြောင်းအချက်တွေရယူလျှက် နောက်ကြောင်းရာဇဝင်အသေးစိတ် လိုက်လံစုံစမ်းတတ်သေးသည်…
လူစုနှင့်ဆုံစည်းဖို့စိတ်မဝင်စားဘဲ တစ်ယောက်ချင်းတွေနှင့်တလှည့်စီတွေ့ကာ နင့်ကိုခင်လို့ပြောပြတာနော်ဆိုပြီး မနေ့ကတွေ့ခဲ့သူအကြောင်းမကောင်းပြောလေ့ရှိပြီး ထိုမနေ့ကတွေ့ခဲ့သူနှင့် နောက်တခါပြန်တွေ့ပါလျှင်လည်း သူနှင့်တွေ့ခဲ့ပြီးသူတစ်ယောက်၏မကောင်းကြောင်းကို ခင်လို့ပြောတာဆိုပြီးပြောပြပါဦးမည်…
သူ့ကိုယ်သူသနားစရာသတ္တဝါလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြံပြောပြီး ကျန်တဲ့သူတွေက သူ့ကိုဝိုင်းနှိပ်စက်နေကျသော လူယုတ်မာတွေဖြစ်ကြောင်းလီဆည်ပြောလျှက် သူနှင့်စတင်ဆုံစည်းသူထံမှ အကြင်နာတွေရယူတတ်သူဖြစ်သည်( တကယ်က သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေခမျာ သူနှိပ်စက်ထားလို့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီ)
သူများဆီက ဂရုစိုက်မှုရယူရန်အတွက် ဘာမှမသိနားမလည်သော အပြစ်ကင်းစင်သူလေးကဲ့သို့လည်း ပုံဖမ်းတတ်ပြန်သေးသည်.. တကယ်တော့သူ့ရုပ်သွင်က လိမ်လည်လုပ်ကြံပြောတတ်သူဖြစ်ကြောင်း ဥပတိရုပ်ကပေါ်လွင်နေရက်နဲ့ သိုးဖြူလေးကဲ့သို့ဟန်ဆောင်နေခြင်းက သိပ်တော့မပိရိလှပါ…
မသိနားမလည်ဟုဗြောင်လိမ်လျှက် သူတပါးကိုညာခိုင်းတတ်သူလည်းဖြစ်သည်… အားနာတတ်သူ အချင်းမပွားလိုသူ စိတ်သဘောဖြူစင်သူတို့ကတော့ သူ့ခိုင်းဖတ်ဖြစ်သွားတတ်သည်… သူ့ခိုင်းဖတ်များမသိအောင် သူ့လောက်ပညာမတတ်ဟု သူယူဆမိသူများအပေါ်မှာတော့ ဆရာကြီးလုပ်ဦးဆောင်ပြတတ်သူလည်းဖြစ်သေးသည်…
သူများမှာရှိနေခြင်းမှန်သမျှအား သူ လိုချင်လျှက်မရရှိသည့်အခါ ထိုသူများအားလုံး ၏ရှိသမျှများသည် ကြွားဝါခြင်းဟု သူယူဆလျှက် မြင်ပြင်းကတ်ကာ ထိုသူများအားကျိန်ဆဲနေတတ်သည်…
နောက်ဆုံးတွင်တော့ သူ့အကုသိုလ်နှင့်သူ ရောဂါတွေရ တချိန်လုံး နေမကောင်းဖြစ်တော့သည်…
တခါတခါ သူ့ကိုယ်သူမလုံမလဲဖြစ်လျှက် ပတ်ဝန်းကျင်မှလူများက သူ့ကိုမုန်းတီးနေကြသည်ထင်တာ တိတ်တိတ်ကြိတ် ကြေကွဲနေတတ်သေးသည်…
ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ထိုမိန်းမရှိသည်… သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိုမိန်းမရှိသည်… ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းထိုမိန်းမရှိနေသည်…
Posted by rose of sharon at 8:12 PM 20 comments:
ဧရာဝတီဟာ ဒေါင်လိုက်တည့်တည့် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့ ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ၊ ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေ အားလုံးပိုင်တဲ့မြစ်
ဧရာတီကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရဲ့ ဆန်စပါးအထွက်နှုန်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးဆန်စပါးအထွက်နှုန်းရဲ့ ၆၀% နီးပါးထွက်ရှိနိုင်ခဲ့တာ... မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အသက်ဆက်နိုင်ဘို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့ဆန်စပါးဟာ ဧရာဝတီကြောင့် ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့တာ... မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသက်ဆက်နိုင်ဘို့က ဧရာဝတီပေါ်မူတည်နေတာ
ဧရာဝတီဟာ မြန့်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာ အရေးပါအရာရောက် အဓိကကျခဲ့တာ... ဧရာဝတီဟာ မြန့်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းရဲ့ စစ်ချီရာလမ်းကြောင်း ၊ ဧရာဝတီမြစ်ရိုးဟာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရန်သူကိုခုခံတွန်းလှန်တဲ့ ခံတပ်တွေတည်ဆောက်ရာနေရာ
ငါတို့ရဲ့မြစ်၊ ငါတို့ရဲ့အသက်၊ ငါတို့ရဲ့သမိုင်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အဖျက်အဆီးမခံနိုင်ဘူး
Posted by rose of sharon at 6:35 AM 20 comments:
Posted by rose of sharon at 10:22 AM 20 comments:
ကျိုက်ထီးရိုးသွားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စိမ်းလဲ့တင် ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်… သူငယ်ချင်းတွေက သောကြာနေ့ သွားပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ပြန်လာကြမယ်ဆိုတော့ ကျမအတွက်က ရန်ကုန်ပြန်မှတက်ရတဲ့ ဘုရားကျောင်းတက်ရမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့လေးအမှီရန်ကုန်ပြန်ချင်တယ်… ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျမသူငယ်ချင်းတွေက တစ်ညအိပ်နှစ်ရက် သောကြာနေ့မနက်သွားပြီး စနေနေ့ညနေပြန်ဘို့စီစဉ်ကြတယ်….
သောကြာနေ့မနက်ရှစ်နာရီခွဲ ကျမတို့ကို လာကြိုပြီး နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဝင်ကြိုပြီးတဲ့အခါ ရန်ကုန်ကနေ မနက်ကိုးနာရီစထွက်ဖြစ်ပါတယ်… တစ်ချို့ကနှစ်နာရီခွဲနဲ့သုံးနာရီကြား ကားစီးရမယ်လို့ပြောကြတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျမတို့က ချောင်ချောင်ချိချိစီးရအောင် Bus ငှားသွားတဲ့အပြင် ခလေးတွေလဲပါတော့ ကားမောင်းတဲ့သူက အရှိန်အနေတော်လေးနဲ့ဘဲမောင်းပေးတာမို့ သုံးနာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်စီးလိုက်ရပါတယ်… လမ်းတွေကလဲ ဟိုးအရင်လောက်မဆိုးတော့ပါဘူး… ကား aircon ကအရမ်းအေးလို့ လျှော့ခိုင်းဘို့ပြောပေမဲ့ လျှော့လို့မရဘူးဆိုလို့ ခလေးတွေကို ခြုံထည်ပုဝါလေးတွေ ခြုံထားပေးရတယ်… ကားခက အသွားအပြန်ကို ကျပ်ငွေသုံးသိန်းခွဲပေးရပါတယ်…
ရောက်ရောက်ချင်း ဧည့်ကြိုကောင်တာလဲဝင်စရာမလိုဘဲ တည်းရမဲ့အခန်းကို တန်းသွားခွင့်ပေးပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုညံ့ဖျင်းတယ်လို့ ကျမတော့ သုံးသပ်မိတယ်…. ဘယ်သူဖြင့်ဘယ်အခန်းဆိုတာမျိုး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာမျိုးမရှိဘဲ ကိုယ်ရပ်မိတဲ့အခန်းရှေ့က နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီး အခန်းသော့ရှာဖွင့်ပေးတယ်… အခန်းပြင်ဆင်ထားတာကလဲ အဖြစ်သဘောလောက်ဘဲ… တီဗွီကလဲ ချယ်နယ်နည်းတဲ့အပြင် စာရင်းထဲမှာရေးပြထားတဲ့ချယ်နယ်တွေလဲ တကယ်အကုန်မရပါဘူး…. Airconကလဲ အိပ်ရာရှိတဲ့ဘက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် အိမ်သာအရှေ့မှာဖြစ်နေတယ်… ရောက်ရောက်ချင်းဘဲ အခန်းအနေအထားကိုကြည့်ပြီး ဒီဟိုတယ် ကြယ်ပွင့်ပေးဘို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် ကြယ်နှစ်ပွင့်တောင် မပေးချင်ပေးချင်နဲ့ပေးရမှာပါ… မိသားစုနေလို့ရတဲ့အခန်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီအခန်းမှာ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်သုံးလုံးချထားပေးပါတယ်… wifi ဆိုတာအခန်းထဲမှာမပြောနဲ့ အပြင် စားသောက်ဆိုင်တွေဘက်မှာလဲမရှိပါဘူး....အခန်းခက သုံးသောင်းခွဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်က တစ်ဒေါ်လာ ၇၈၀ နဲ့ဆိုရင် ၄၅ဒေါ်လာ လောက်ကျပါတယ်…
အစားအသောက်ကတော့ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ရင် မတန်ပါဘူး… လမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင်အဆင့်လောက်ဘဲရှိပေမဲ့ ကျမတို့ အုပ်စု တခါစားရင် ၈သောင်းကျော် ၉သောင်းလောက်ရှင်းရပါတယ်…
ရေကူးကန်ရှိပေမဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုညံ့ဖျင်းတဲ့အတွက် သန့်ရှင်းမှုမရှိပါဘူး… သမီးလေးကရေခဏဘဲကူးပြီး သားကတော့ ညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြီး ရေကန်ထဲတောင် မဆင်းတော့ဘူး… ကစားကွင်းကလဲ သံချေးတက် တဲ့ကစားစရာတွေနဲ့ ဆိုတော့ ခလေးတွေဒါန်းဘဲစီးခဲ့ရပါတယ်… တိရိစ္ဆာန်ရုံလေးကလဲ ညစ်ပတ်နံစော်နေလို့ သားလေးက အန်တောင်အန်လို့ သမီးလေးနောက်တခေါက်သွားချင်တဲ့အခါ သားကို အပြင်မှာစောင့်နေခိုင်းရပါတယ်….
သူတို့ကြော်ငြာထားတာတွေနဲ့တော်တော်ကိုလွဲပါတယ်… အကောင်တွေလဲ ကြော်ငြာထားသလောက်မရှိသလို ကြောငြာထဲကလို ရှိုးပွဲတွေလဲမရှိပါဘူး…
သူ့ဟာသူဆို မြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ဘဲရမှာပေါ့လို့တင်းတိမ်နိုင်ပေမဲ့ ကြော်ငြာထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုမှကို စိတ်တိုင်းမကျနိုင်ပါဘူး… တကယ်တော့ ကျမက အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားမဟုတ်ပါဘူး… တော်ရုံတန်ရုံလွဲတာမျိုးက လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့တွေးပေးလိုက်လို့ရပေမဲ့ ခုတော့ ကြောငြာထဲကအတိုင်းထင်ပြီး ခလေးတွေကို အရမ်းကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးခေါ်လာမိလေတော့ ကျမက အရင်အညာခံလိုက်ရသလိုခံစားရတဲ့အပြင် ခလေးတွေကိုပါညာခေါ်မိသလိုဖြစ်သွားမိတဲ့အတွက် သွားဖူးသူတွေကိုမမေးမြန်း မစုံစမ်းမိခဲ့ခြင်းအပေါ် နောင်တရမိပါတယ်…
တစ်ညအိပ်ဘဲမို့တော်ပါသေးရဲ့လို့ဖြေသိမ့်ပြီး အောင့်အည်းနေခဲ့ရပါတယ်… စားသောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေ အိပ်ခန်းဆောင်ကဝန်ထမ်းတွေကတော့ ရိုးသားဖော်ရွေပြီး တတ်နိုင်သလောက်ကူညီကြပါတယ်… ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရှိရက်နဲ့ အဆင့်မှီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တာက ပိုင်ရှင်နဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေ ညံ့ဖျင်းမှုလို့ ကျမတော့ ယူတမိပါတယ်…
စနေနေ့ညနေမှပြန်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ ကျမတို့အားလုံးညနေအထိမနေချင်ကြတော့တာမို့ မနက်ဆယ်နာရီလောက် check out လုပ်ကြပါတယ်… အဲဒီအချိန်မှဘဲ သူတို့ဆီက လက်ကမ်းစာစောင်လေးထဲမှာ အခန်းခတွေရေးထားတာတွေ့လို့ကြည့်မိတော့ ကျမတို့နေခဲ့တဲ့အခန်းဟာ သုံးသောင်းတန်ဖြစ်နေပါတယ်… ဒါနဲ့ ဧည့်ကြိုကအမျိုးသမီးကိုပြောပြတော့ အဲဒါဈေးအဟောင်း… ခုဈေးတက်သွားတဲ့ဈေးကို ပြင်မရေးရလို့သေးလို့တဲ့…
ကျမတို့တတွေ မကျေနပ်ပေမဲ့ ကျသင့်ငွေရှင်းပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်… ဒီခရီးစဉ်အပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိပေမဲ့
ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းတတွေ စိတ်သဘောတူညီစွာ (ကြိုက်တာလဲတူ မကြိုက်တာလဲတူ ) အတူသွားခဲ့ရတဲ့ခရီးလေးမို့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်…
Posted by rose of sharon at 11:51 AM 16 comments:
Posted by rose of sharon at 6:53 AM 17 comments: